असार २३ अर्थात आज राजाबाट नागरिक भइसकेका पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र को जन्मदिन रहेछ । ज्ञानेन्द्रको जन्मदिन हो भन्ने कुरा बेलुका केही अनलाइन मा देखिएका समाचार, अनि फेसबुक, ट्विटर र गुगलप्लसमा भएको कुराकानी बाट थाहा पाएँ । प्रायजसो सबै पोर्टलहरुमा, ज्ञानेन्द्र ले यसो भने भनेर, भिडियो र फोटो (फोटोफिचर) सहित नै समाचार प्रकाशन गरिएको रहेछ । सायद टेलिभिजन र रेडियो ले पनि यही कुरालाई प्राथमिकता का साथ प्रशारण गरिरहेका होलान् । त्यति मात्र होइन, ज्ञानेन्द्र ले यसो र त्यसो भने भनेर, पार्टिका नेताहरुले वक्तव्यवाजी पनि गर्न भ्याइसकेहोलान् । अनि म पनि ‘ज्ञानेन्द्र शाहलाई जन्मदिन को शुभकामना’ भन्दै यो ब्लग लेख्दैछु ।
जो कोहीलाई राजा को बारेमा सोध्दा मैले पाउने जवाफ हुन्छ ! मेरो लागि ‘विरेन्द्र’ मात्र राजा थिए । यो ज्ञानेन्द्र त यस्तो हो, त्यस्तो हो ! ज्ञानेन्द्र को प्रसंग निस्कदा आमा र दिदीबहिनी को गालि दिएरै, सराप्ने मान्छेहरु पनि भेटेको छु । सबैले सम्झन नचाहने र देखि नसहने व्यक्ति बनेकाछन् ज्ञानेन्द्र । उनले त्यसबेला हत्याकाण्ड मच्चाए, मच्चाएनन् त्यो कुरा आफ्नो ठाउँ मा । दोष, गुण, वैगुण सबैमा हुन्छ । ‘शाही कदम’ का नाम ले कदम चालेर, उनले सबै कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दुष्प्रयास गरेका कारण, झनै धेरै आलोचित भए । अनि त्यसबेला ज्ञानेन्द्र ले ‘मिडिया’ मा ‘लगाम’ लगाउने/स्वतन्त्रता को उपभोग गर्न नदिने जस्ता अलोकतान्त्रिक कदम चालेका कारण मलाई ज्ञानेन्द्र मन नपरेको हो । त्यस समय म ‘ब्लग’ मा त लेख्दिन थिँए, तर मैले त्यस समय मा डायरी का धेरै पानाहरु यसै विषय मा भरेको छु । कुनै सन्दर्भ मिलेछ भने, त्यो पनि ब्लगमा लेखौँला !
राजनितिक दलहरुले आफ्ना गतिविधि गर्न पाएनन्, एकदलिय सरकार भो भन्दा पनि, उनीहरुले चलाएको सरकार को कामकारवाहीहरु मलाई मन नपरेको हो । टंक खनाल र तुलसी गिरी जस्ता व्यक्तिहरुले, ‘प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता’ का बारेमा बोल्ने गरेका कुराहरुले मेरो मगज तात्ने गर्थ्यो । उनीहरुले त्यस समय मा अत्यन्त लोकप्रिय रहेको एफएमको समाचार ले एफएम रेडियोले बजाउन पाइँदैन भनेर जुन किसिम का तर्क गरेर, समाचार बन्द गराए, रेडियो सगरमाथा, रेडियो कान्तिपुर मा जसरी जवरजस्ति लुटपाट गरे । मलाई उनीहरु मन नपरेको कारण यत्ति नै थियो कि, ‘उनीहरुले हाम्रो सुसुचित हुनेहक र वाकस्वतन्त्रतामा अंकुश लगाए’ । यत्ति कारण ले म ज्ञानेन्द्र शाह को शासन सँग रुष्ट थिएँ, अनि मैले पहिलो पटक पाटन दरवार स्कवायर मा लोकतन्त्र को लागि थालिएको आन्दोलन मा भाग लिएको थिँए । त्यसैदिन ‘लोकतन्त्र’ को नाम सुनेको थिँए, अनि उत्तिनै बेला मैले ‘लोकतन्त्र’ लेखेको टिसर्ट किनेर लगाएको थिँए । बाँकि कुरा, जुनसुकै दल र पार्टि ले पनि लुटिरहेकैछन्, यिनले नि सकेको लुट्छन् भन्ने मात्र लाग्यो ! मलाई जुनसुकै को सरकार आएपनि, खासै मतलव छैन भन्दा हुन्छ । मात्र यही हो कि, ‘जनताले स्वतन्त्रता को उपभोग गर्न पाउनुपर्यो’, ‘विकास निर्माणका’ कामहरु अगाडि बढाउनुपर्यो ।
देशमा ठूलो आन्दोलन भयो, ज्ञानेन्द्र ले सत्ता छोडेर नागरिक भएर बसे । अब मलाई आजको प्रसंग जोड्न मन लाग्यो । जो कोही नागरिक ले पनि आफ्नो जन्मदिन आफ्ना साथिभाइ, इष्ट्मित्रसँव भव्य रुपले मनाइरहेकै हुन्छन् । उनी भुतपुर्व राजा हुन्, उनले नागरिक को हैसियत ले आफ्नो जन्मदिन मनाइरहेछन् त अरुलाई किन टाउको दुख्नु । बिहे को सिजन मा काठमाडौँ का सडकमा हिँड्न सकिँदैन । आफ्नो धन को तुजुक देखाउँदै बाटो भरि बाजा बजाउँदै र्याली नै गरिरहेकाहुन्छन् । यो भोगेकै कुरा हो । राष्ट्रपति हुँदा पनि सवारी को नाम मा सास्ति पाइएकै छ भने, ज्ञानेन्द्र को सवारी ले उ बेला खुब सास्ति दिएको थियो भन्दै हिँड्नुपर्ने जरुरी छैन ।
हाम्रा पत्रिकाहरु ले ज्ञानेन्द्र को धेरै खोइरो खन्छन् । सँधै माघ १९ र जनआन्दोलन मा लगेर कुरा टुङ्ग्याउँछन् तर उही ज्ञानेन्द्र ले गर्ने जुनसुकै कार्यलाई पनि प्रमुखताका साथ समाचार प्रशारण र प्रकाशन गर्छन् । यो पत्रिकावालाहरुको कस्तो किसिम को निति हो ? उनी सामान्य नागरिक भइसकेका कारण, उनले गर्ने गतिविधिलाई किन आम नागरिक ले गर्ने काम सरह लिन सक्दैनन् ? आज उनले जन्मदिन मनाए, त्यही ठूलो खबर भयो,केही अनलाइनपोर्टलहरुले फोटो फिचर र भिडियो नै हाल्न भ्याइसके । गर्नेबेला ज्ञानेन्द्र कै धेरै आलोचना गर्ने, तर उनैले अहिले गरेका काम, कुरालाई चाँहि किन धेरै प्राथमिकता दिएर प्रकाशन प्रशारण गर्ने? अनि उनको जन्मोत्सवमा गएर, अहिले को वर्तमान परिस्थिति को बारेमा राजनितिक प्रश्न सोध्ने, अनि उनले जवाफ दिएपछि चाँहि, नागरिक भइसकेका ज्ञानेन्द्र ले यस्तो र त्यस्तो भन्दै नानाथरि भनेर भनेर समाचार छाप्ने यो कस्तो मापदण्ड को नेपाली मिडिया को ?
च्याउसरी टेलिभिजन स्थापना भएका छन्, ज्ञानेन्द्र ले बोलेको यही खबर कति का लागि पावर न्युज र बिग न्युज भए होलान् ! नचाहिने कुरालाई हामी आफैँ किन महत्व दिँदै प्रकाशन प्रशारण गर्ने? अनि ज्ञानेन्द्र ले भनेका कुरा लिएर, नेताहरुले किन वक्तव्यवाजी गर्नु ? सायद भोलि का पत्रपत्रिकाले ज्ञानेन्द्र ले भनेका कुरा को पुर्ण पाठ भन्दै समाचार छाप्लान्, अनि बुझक्कडहरुले लेख पनि छपाउलान्, ज्ञानेन्द्र को भनाइको कटु आलोजचा गर्दै ! आज उनले, ‘यस्तो होला भन्ने सोचेको थिइन’ भनेछन्, के चाँहि गल्ति भने त ? उनले गल्ति भनेको भए, गल्ति भन्यो भन्दा भइहाल्यो । दर्जनौँ पटक प्रधानमन्त्री को चुनाव गर्ने र सँधै कुर्सी को लागि लडाइ गर्ने, अहिले ज्ञानेन्द्र ले यस्तो टिप्पणी गर्यो भनेर, हामी किन बुरुक्क उफ्रिने ? हामीले आफुलाई सुधारेर देखाऔँन, ज्ञानेन्द्र ले भन्ने बाटो नै रहँदैन । आफू काम नगर्ने तर अर्को ले यस्तो भनेर टिप्पणी गर्यो भन्दै किन हामी चर्किने? हामी सबैले उनलाई नागरिक हुन् भनेर स्विकार गरिसकेपछि पनि, उनैको खबर को लिन हामी किन पछि लाग्नु ! ज्ञानेन्द्र सबैका चासो का विषय नै हुन्, उनले के गर्छन्, के भन्छन् भन्ने कुरा पनि सबैको चासो को विषय हो, तर पनि उनले भन्ने गरेका कुराहरुलाई हल्का रुपले लिए त भइहाल्यो । हामीले चर्चा गर्न छोडेपछि उनले बोल्न आफैँ छोड्छन् ।
अब एउटा फरक प्रसंग, ज्ञानेन्द्र ले फेसबुक चलाउँछन् कि चलाउँदैनन् थाहा छैन । तर ४५ सय भन्दा धेरै साथी भएको उनको एउटा ‘डुप्लिकेट’ फेसबुक प्रोफाइल को ‘वाल’ भने शुभकामना सन्देश ले भरिएको छ । अब सायद कतिलाई लाग्दो होला, ज्ञानेन्द्रलाई शुभकामना भन्नेहरु त ‘लास्टै राजावादी’ हुन् । तर यो कुरा साधारण नै मान्नुपर्छ, जन्मदिन को दिन कसको फेसबुक मा चाँहि शुभकामना सन्देश नलेखिएला? तपाई को जन्मदिन हो भने, तपाईका साथीहरुले तपाई को फेसबुक मा ‘शुभकामना’ भनेर अवश्य लेख्छन् । ज्ञानेन्द्र ले बोलेका र गर्ने गरेका कुराहरुलाई बढाइ चढाइ धेरै महत्व दिने काम नगरौँ, उनी पनि हामी जस्तै ‘नागरिक’ नै हुन् भन्ने कुरा ख्याल गरौँ । उ बेला को ‘धङ्धङी’ ज्ञानेन्द्र मा पक्कै होला नै तर हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो काम गरौँ । दलहरुले मिलेर चाँडोभन्दा चाँडो संविधान बनाउन्, ज्ञानेन्द्र ले ‘चुँ’ गर्ने सम्म हिम्मत गर्न सक्दैनन् । आफू ‘चुकुल’ नलगाउने अनि चोर ले चोर्यो भनेर कुर्लेर हुन्छ । चोरी बाट बच्नु छ भने त आफूले पनि केही सुरक्षात्मक रणनिती त अपनाउनु पर्यो नि !
Sweta Gyanu Baniya August 1, 2012 at 11:55 AM
I really agree with your views...Former King Gyanendra has equal right to liveacivilian life...Media should not hype the issue.